Nhasi tinokuunzira 25 mitsara yekurangarira Arthur Conan Doyle | Zvazvino Zvinyorwa
Pazuva rakaita nhasi Chivabvu 22 asi gore 1859 rakazvarwa Arthur Conan Doyle, iye musiki weanonyanya kuzivikanwa mutikitivha, Sherlock Holmes. Chiremba akazvarwa muElinburgh, United Kingdom uyo akazvipira kuita kunyora uye akatiunzira anoshanda anoshamisa seiya atotaurwa.
Nhasi izuva rekuzvarwa kwake uye isu taida kugadzira a mutero mudiki mune mavara. Pane here iri nani nzira yekurangarira munyori pane nezvako mitsara uye nhoroondo? Zvakanaka kwete ... hapana. Gara nesu uye unakirwe nemitsara iyi makumi maviri neshanu yekurangarira Arthur Conan Doyle. Tinovimba unovada!
Mashoko naArthur Conan Doyle
"Hupenyu hausingazivikanwi kupfuura chero chinhu chinogona kugadzirwa nepfungwa dzemunhu."
"Hazvibatsiri kudya tariro asi wozogumbuka."
«Mediocrity haina kuziva chero chinhu chakakwirira pachayo; asi tarenda rinobva aziva hunyanzvi. '
"Mutengi ndeyangu nyore unit, chinhu chiri mudambudziko."
"Ini ndinonzi Sherlock Holmes uye bhizinesi rangu ndere kuziva izvo vamwe vanhu vasingazive."
"Hupenyu hwakangwara zvakanyanya uye hunogona kuchinjika kupfuura chero munhu waakambofungidzira."
"Zvinogona kugadzirwa nemurume mumwe, mumwe anogona kuwana."
"Mufungo wemukadzi unogona kuve wakakosha kudarika kuongororwa zvine musoro."
"Munoona, asi hamuoni."
"Hapana chinonyengera kupfuura chokwadi chiri pachena."
"Zvinogara zvakaoma kuti murume aone kuti sei angave akarasikirwa nerudo rwemukadzi, kunyangwe akamubata zvakaipa sei."
"Kana zvese zvisingakwanisike zvabviswa, chinosara, chisingafungidzike sezvachinogona kuita, chinofanira kunge chiri chokwadi."
"Ndiri omnivorous muverengi neyeye-isina kugadzikana ndangariro yezvinhu zvisinganzwisisike."
«Remangwana rinosangana naDestiny. Ikozvino ndeyedu ikozvino.
"Chero chinhu chiri nani pane kumira."
Kune nguva dzose kune vamwe vanopenga varipo. Inenge iri nyika isingafadzi pasina ivo.
"Ndakadzidza kusamboseka pfungwa yemurume chero upi zvake, zvinoshamisa sezvazvingaite."
"Muedzo mukuru wehukuru hwechokwadi hwemunhu urimo mukufunga kweudiki hwake."
"Yakagara iri chirevo changu chekuti zvinhu zvidiki zvakanyanya kukosha."
"Hupenyu hwese iketani huru, zvisikwa zvinotiratidza kubatana kwayo nguva imwe neimwe."
"Kana pasina fungidziro, hapana chinotyisa."
"Ini ndinoreurura kuti ndanga ndiri bofu kupfuura mole, asi zviri nani kudzidza kunonoka pane kusambodzidza."
"Kuda mabhuku ndechimwe chezvipo zvakasarudzika zvezvimwari."
Pane zvese zvipoko, zvipoko zveedu ekare rudo ndizvo zvakanyanya.
Zvirinani kudzidza huchenjeri nguva yapfuura pane kusambohudzidza zvachose.
Iwe unofungei nezve aya mazwi? Une chero chawakada zvakanyanya here? Ini ndinochengeta nhamba 11.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » 25 mitsara yekuyeuka Arthur Conan Doyle
Iyo nhamba 20 <3
Franco DAmelio akadaro
Mhoroi, ndinoda kuziva kuti nderipi bhuku nhamba yegumi rinomuka kuitira kuti ndikwanise kuritsanangura nemazvo. Ndatenda.
Pindura Franco DAmelio